राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकता | Madhesi - United We Stand
राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकता
October 17, 2006 at 4:24 pm Leaveacomment
दसैं आयो र गयो पनि तर राजा महेन्द्रकै पालादेखि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको प्रपञ्च रचेर जबर्जस्ती राज्यविहीन बनाइएका, हरेक किसिमको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मारमा पारिएका मधेसी नेपालीको समस्यामा किन्चित पनि फरक आएन । सायद यस सन्दर्भमा ‘आउन दिइएन’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गर्नु बढी उपयुक्त होला । मधेसमा नागरिकतासम्बन्धी स्वर चर्किँदै गएपछि सत्तासीन वर्गका विभिन्न यन्त्रहरू दसैंलगत्तै गाउँ-गाउँमा सर्वदलीय टोली पठाएर नागरिकता बाँड्ने ढ्वाङ फुक्दै आएका थिए । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि धर्ना बसेका यस्ता जबर्जस्ती राज्यविहीन बनाइएका दलितहरूलाई नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिखित आश्वासन पनि दिए । उक्त आश्वासनमा गृह मन्त्रालय तथा तथाकथित नागरिकता समस्या समाधान गर्न गठित संसदीय समिति संयोजकको वचनबद्धतालाई आधारका रूपमा उद्धृत गरिएको थियो । नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि प्रस्तुत गर्‍यो तर त्यसमाथि छलफल र टुङ्गो लगाइने कामचाहिँ भएन । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा घोषणाका अन्य सबै कुरा कार्यान्वित हुन सक्छन् अन्य विषयबारे अन्तरिम र दीर्घकालीन निर्णयहरू हुन्ा सक्छन् तर मधेसको नागरिकता समस्याबारे प्रतिनिधिसभा घोषणाको बुँदा ६ कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम संविधान पर्खिनुपर्ने तर्क आउन थालेका छन् । अन्तरिम संविधान घोषणापछि पनि यस पर्खाइको अन्त्य होला भन्ने लाग्दैन ।राज्य र सरकारको यस्तो स्वभाव मधेसीहरूका लागि नयाँ होइन । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नागरिकताको विषयमा आलटाल गर्ने कुरामा स्थायी मतैक्य रहेको जस्तो छ । ०४६ पछिका दिनहरूमा यस समस्याको न्यायपूर्ण समाधानको आश्वासन लगभग सबैले दिएका छन् । बेला-बेलामा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी सबैले नाटकीय प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ । महन्थ ठाकुर, धनपति उपाध्याय आदि आयोग बनाइएका छन् । यसभन्दा अघि पनि विधेयक प्रस्तुत भएकै छन् तर प्रतिनिधिसभामा समर्थन गरेको एमालेले राष्ट्रिय सभामा गएर विरोध गरेको छ । जेनतेन पारित विधेयक राजा वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्दको पालासम्म थन्काइएर तुहाइएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रक्रियालाई अलि खुकुलो गरेको देखाएर लगत्तै फेरिे औज्ाारका रूपमा अदालतको प्रयोग गरी त्यसलाई रोक्ने र वितरित प्रमाणपत्र रद्द गर्ने काम पनि भएको छ ।
राज्य र सत्तामा प्रभुत्व जमाएर बस्नेहरूलाई नागरिकता लगायत अन्य नागरिक अधिकार र अवसरका क्षेत्रमा मधेसीहरूलाई यसरी ठग्ने खेल रमाइलो र आनन्ददायी लाग्ने गरेको हुनुपर्छ । तर यही खेलको अर्को पाटो देशमा विखण्डन र विस्फोटक परिस्थिति तयार गरिरहेको सायद कमैलाई थाहा होला । राजादेखि राजनीतिक दलका नेताहरू यस देशका आदिवासी मधेसीलाई देशको अङ्ग र नागरिक नै मान्दैनन् । दुनियामा कहीँ पनि जन्मेका खस वा मंगोल मूलका व्यक्ति नेपाली र यस राष्ट्रका अङ्ग हुन्छन् भने नेपालमै जन्मे/हुर्केका यहीँकै आदिवासी मधेसीहरू नेपाली हुनै सक्तैनन् भन्ने कटु सन्देश यस खेलले नेपालका मधेसीहरूका मनमा नमेटिने गरी कोरिरहेको छ र त्यो पनि देशभक्ति र राष्ट्रियताको नाममा उच्च वर्ग र जाति विशेषको प्रभुत्ववादी अन्ध राष्ट्रवादका प्रभावमा रहेका हाम्रा कतिपय मित्रहरूलाई नेपालको वर्तमान सिमानाभित्रका मधेसीहरू फिजी, मौरिसस आदि देशमा निर्वासित भएर गएका भारतीयजस्ता लाग्छन् । त्यसैले मधेसीलाई नागरिकता र नागरिकको हैसियतले पाउनुपर्ने नागरिक अधिकार तथा राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा समान अवसरको हकको कुरा उठ्दा उहाँहरूको टाउको दुख्न थाल्छ । मधेसीलाई स-सम्मान घर-घरमा गएर नागरिकता दिनुपर्ने कुरा उठ्दा विदेशीले नागरिकता पाउलान् भन्ने तर्क दिनेहरू सर्वप्रथम शाहराजाहरूको राज्य विस्तारभन्दा पहिले मधेस कसको भूमि थियो र यहाँ विदेशी जस्तो बाहिरबाट आएर बसेकाहरू को हुन् वास्तविकतालाई बुझ्नु आवश्यक छ । तथ्य त के छ भने मधेस थारू, अवधी, भोजपुरी, मैथिल, माझी, दनुवार, धाँगड, सतार, राजवंशी आदि सम्पूर्ण मधेसीको भूमि हो र यी यस भूमिका आदिवासी हुन् । यस भूमिमा पछि आएर बसेकाहरू बाहिरिया हुन् । यस्ता तर्क दिनेहरूको भित्री मनसाय शाहराजाहरूको राज्य विस्तारपछि अन्य भागको एकीकरण र मधेसको औपनिवेशीकरण भएको हो भन्ने त छैन ? राज्य र सत्तामा प्रभुत्व जमाएर बस्नेहरूलाई मधेसलाई ठग्नेे खेल चाहेजति आत्मरति प्रदान किन नगरोस् तर यस्ता खेलले मधेसीलाई अब यी सबै कुराको चिरफार गर्न बाध्य गरिरहेछ । कता-कता यस्तो खेलले मधेसी युवालाई हिंसाको बाटो औल्याएर देखाउने काम गरिरहेछ ।
फिजी, वेस्टइन्डिज र मौरिससजस्ता देशमा सैकडौं वर्षदेखि वसोवास गरेका विदेशी मूलका नागरिक राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक अवसरबाट अलग्याइएका छैनन् । तिनीहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने अवसर पाएका छन् । देशको प्रमुखसम्म भएर राजनीतिक भूमिका पूरा गर्न सक्छन् । त्यहाँका सेनामा तिनको प्रवेश निषिद्ध छैन । सञ्चारमाध्यममा तिनलाई छाँटेर देखाइने वा प्रसारण गर्ने चलन छैन । खेलकुदमा देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् र सरकारी सेवामा पहुँच सहज छ- यहाँ जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्दै नगरी कृपाको आधारमा जागिर दिने वा प्रतिस्पर्धा गर्दा जानाजान छाँट्ने नियत हुँदैन ।
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारभन्दा पूर्व मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुरका सेन राजा मातहत रहेको मधेसको पूर्वी भागलाई १७७४-७५ई.मा अर्थात् लगभग २३१ वर्ष पहिले आक्रमण गरेर शाहराजाहरूले आफ्नो राज्यमा मिलाएका थिए । पूर्वमा शाहहरूको राज्य विस्तार दार्जिलिङसम्म भएको थियो । किराँत पनि त्यसै बेलादेखि गाभिएको हो । त्यस्तै मधेसको पश्चिमी भाग भने १७७८-१७९० ई. तिर शाहराजाको राज्य विस्तारमा परेको थियो । त्यसपछिदेखि सम्पूर्ण मधेस विजित भूभाग र थारू, अवधी, भोजपुरी, मैथिल, माझी, दनुवार, धाँगड, सतार, राजवंशी सबै मधेसी सामूहिक रूपमा पराजित राष्ट्रका रूपमा तिरस्कृत छन् ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने मित्रहरूले एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने के छ भने राष्ट्रको अर्थका बारेमा दुई किसिमबाट विचार गर्न सकिन्छ । समान नाक-नक्स, रहन-सहन, एउटै समूहको भाषा, ऐतिहासिक एकरूपता आदि भएको समुदाय एउटा राष्ट्र हो अथवा आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा देशको सिमानाभित्रका सम्पूर्ण नागरिक समग्रमा एउटा राष्ट्र हुन् । यस अर्थमा राज्य र राष्ट्रको बीचमा खासै भिन्नता पाउन गार्‍हो नै हुनेछ । राष्ट्रको पहिलो अर्थ बढी उपयुक्त र मान्य छ । एउटा देशमा एकभन्दा बढी राष्ट्रको उपस्थिति हुन सक्छ तथा यसो भएमा ती एकभन्दा बढी राष्ट्रबीच समानताको आधारमा सहअस्तित्वको ग्यारेन्टी अत्यावश्यक छ । यसको अर्को अर्थ अर्थात् एउटा देशभित्रको सिमानामा बस्ने सबैलाई एउटा राष्ट्र मान्ने हो भने पनि त्यस देशभित्रका सबै व्यक्तिको समान नागरिक हक देशको एकता र अखण्डताका लागि जरुरी छ । त्यसकारण मधेसी जनतालाई अलग राष्ट्र मान्नेहरूले पनि तिनको समान हकलाई स्वीकार गर्नुपर्छ नत्र भने तिनले आत्मनिर्णयको आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु अनुचित हुने छैन । होइन देशको सिमानाभित्रका सबै नेपाली हुन् भने शान्त तवरले तिनीमाथि जारी विभेदपूर्ण नीतिको तत्काल पूर्णपरित्याग आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने देशको राजनीतिक सिमानाको आधारमा परिभाषित राष्ट्रियता परिवर्तनशील हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशजको राज्य विस्तारपछि नेपालको सिमानाभित्र पराजयका कारण गाभिएका क्षेत्रका नागरिकको राष्ट्रियतामा परिवर्तन भएकै हो । सन् १९४७ मा यसैगरी छिमेकी देश भारतका धेरै नागरिक पाकिस्तानी राष्ट्रियतामा परिवर्तित भएका थिए । बंगलादेशको उदय हुँदा पनि पूर्वी पाकिस्तानका नागरिक रातारात बंगलादेशी बन्न पुगे ।
नागरिकता भनेको कुनै राजनीतिक एकाइ अर्थात राज्यको सदस्यता प्राप्त गर्नु हो तथा नागरिक भन्ने शब्दको उत्पत्ति नगरमा स्थायी रूपमा वसोवास गर्ने व्यक्तिलाई इङ्गति गर्न भएको हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नगरको स्थान राज्यले लिइसकेको छ । राष्ट्रको आधुनिक अर्थलाई आधार मान्ने हो भने नागरिकता र राष्ट्रियताको अर्थ मिल्दोजुल्दो हुन जान्छ । जबकि कुनै व्यक्ति नागरिक नभएर पनि कुनै खास राष्ट्रियताको अङ्ग हुन सक्छ र एउटै व्यक्ति सम्बन्धित देशको कानुनले दिन्छ भने दुईभन्दा बढी देशको नागरिक पनि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा कमनवेल्थ र युरोपियन युनियनको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नागरिकताले सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस देशमा उपलब्ध सबै नागरिक हकको निर्वाध प्रयोगको ग्यारेन्टी दिन्छ ।
कुनै पनि राज्यमा स्थायी रूपमा वसोवास गर्ने सबै त्यस राज्यका नागरिक हुन् । कसैलाई पनि उसको वासस्थानबाट वञ्चित गर्न सकिन्न न त तिनलाई राज्यविहीन पार्न सकिन्छ । त्यसैले स्थायी रूपमा देशभित्र बसिसकेेकालाई पनि नागरिकता प्राप्तिबाट अलग राख्न सकिन्न । विदेशीहरू आएर यहाँ घरजम गर्ने कुरालाई नियन्त्रित गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले नेपालको सिमानालाई व्यवस्थित गर्नु बढी उपयुक्त होला । तिब्ब्ात, दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बिहार, उत्तरप्रदेश सबैतिरबाट भइरहने वा हुन सक्ने नयाँ प्रवेश पूर्णतः रोकिनुपर्छ । तर स्थायी रूपमा वसोवास गरिसकेकालाई नागरिकताबाट वञ्चित राख्ने कार्य गर्नु हुन्न ।
मानव बसाइ सराईँको प्रवाह कम सुविधा भएको स्थानबाट बढी सुविधा र राम्रो जीवनस्तरको सम्भावनातिर हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल र भारतबीचमा हुने बसाइ सराईँको प्रवाहलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा भारतबाट सर्नेहरूको संख्याभन्दा कैयन गुणा बढी भारतमा नेपालीको हुन्छ । दिल्ली, पञ्जाब, हरियाणा, कोलकाता, मद्रास, बिहार, युपी, मुम्बई आदि स्थानमा नेपाली सराइको प्रवृत्ति छ । विकसित देशका सरकार आफ्ना नागरिकको रोजगारको अवसर तथा जीवनस्तर वृद्धिप्रति बढी क्रियाशील हुन्छन् । जनसंख्या नियन्त्रणका लागि बाहिरबाट प्रवेश गर्नेहरूमाथि नजर राख्छन् तर प्रवेश गरिसकेकाप्रति अनुदार हुन्नन् । नागरिकताको हक र त्यससँग जोडिएका सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक अधिकार मनुष्यको नैसर्गिक अधिकार हो । यसबारे यी देशहरू उदार छन् । नेपाल विश्वका अन्य मुलुकभन्दा नागरिकताको मामिलामा बढी अनुदार छ । दुनियाभरिमा नागरिकता प्राप्तिका यी आधारहरू प्रचलित छन्- १. जन्मसिद्ध -लेक्स सोली) २. वंशज -लेक्स सैङ्गििनस) ३. वैवाहिक ४. अंगीकृत
५. बसोबास ।
नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिँदैन । वैवाहिक नातामा दिइने नागरिकतामा ठाडो लैङ्गकि विभेद छ । नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा उनको आफ्नै नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । घरघरेडी नभएको अथवा जानाजान टोलीले नाम दर्ता नगरेका लाखौं मधेसी वंशजका नाताले नेपाली नागरिक भए पनि तिनीहरूलाई राज्यविहीन बनाइएको छ । स्थायी बसोबासका आधारमा ऐनमा उल्लिखित सर्त पूरा गरी अंगीकृत नागरिकताका लागि दिइएका लाखौं निवेदन वर्षौंदेखि गृह मन्त्रालयमा धमिराका आहार बनिरहेछन् ।
नागरिकताका कारण राष्ट्र विखण्डनमा परेको उदाहरण छैन । इतिहासमा अहिलेसम्म विभेद र वर्चस्ववादी प्रवृत्ति राज्य विखण्डनको मूलकारण देखिएको छ भने त्यहीँ समता र सहअस्तित्त्व राज्यको मजबूती र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धकसिद्ध भएको छ । नागरिकताको सन्दर्भमा राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि खतरा देखाउने प्रयत्नमा दिइएका तर्कहरूको भित्री बोली वर्चस्व र विभेदको बोली हो ।
Case Study – Crisis of Identity and Compulsions of Survival: Paradox ofaMadhesi Youth	Historical: Jung Bahadur pleasure at the cost of Terai plight